🥇 Garmin Forerunner 955 nwere ike ịmalite na September, New Tracks na-atụ aro - 【Comparison】
Garmin Forerunner 45 L / G - Multisport Lelee na GPS, Integrated Heart Rate Monitor Technology, Agba ojii
Hazie atụmatụ ọzụzụ gị iji kwekọọ na 5km, 10km ma ọ bụ ọkara marathon mgbaru ọsọ, gụnyere ngwa maka ịgba ọsọ, ịgba ịnyịnya, ụzọ ime ụlọ, igwe ịgba ọsọ, elliptical, cardio, yoga na ndị ọzọ
Garmin Forerunner 955 Nwere ike ịmalite na September, A ga-atụ aro ọhụụ ọhụrụ
Enwere ike ịhazi Garmin ka ọ hapụ ndị na-eso ụzọ ahụike dị mma na Septemba dịka usoro ọhụụ nke ngwa FCC ID, nwere ọkwa ọhụụ ọhụụ n'afọ.
Enyere arịrịọ smartwatch abụọ na July 14, gbakwunye otu arịrịọ maka ọkwa, mana gịnị ka ha nwere ike ịbụ?
Na Nọvemba 2019, onye na - eme ihe n’ile anya na - achọpụta ihe dị ogologo nke ngwaọrụ ọhụrụ zoro ezo na faịlụ echichi maka ngwa Garmin Jikọọ. Ọtụtụ n’ime ndị a adịlarị maka ịzụrụ n’oge a chọtara, ebe ọzọ ahapụla ọzọ (gụnyere Garmin Tactix Delta Solar ọhụrụ).
Agbanyeghị, a ka nwere ọtụtụ aha na-adọrọ mmasị na listi ahụ, gụnyere Garmin Forerunner 955 (mgbe ọkọlọtọ Forerunner 945) na Onye mbu 745 (onye nọchiri Onye ọhụụ 735 XT).
Anyị nwere ike ịme atụmatụ amamịghe n'oge a, mana ndepụta nke ngwaọrụ achọpụtara na ngwa Garmin Connect depụtara nsụgharị abụọ nke Onye bu ụzọ 955 (ọkọlọtọ na LTE), yabụ anyị nwere mmasị ikwere na ndị a bụ elekere abụọ na nso nso a. kwadoro.
Enwekwara ihe omimi ozo na ngwakọta: gini ka Garmin Forerunner 745 ga - abu? 735XT bụ elekere kacha mma na-ere 'mmefu ego' triathlon, enwere ike ịrụrịta ụka na ọ dị mkpa ka emelite ya dịka ọ dị n'ahịa kemgbe afọ anọ.
Agbanyeghị, ọtụtụ elekere n'ahịrị Garmin Forerunner nwere ike ijikwa ikike triathlon, gụnyere Onye bu ụzọ 645. Nke ahụ kwuru, akpọrọ 645 "elekere agbụrụ" nke nwekwara ike ijikwa ịgba ịnyịnya na ịgba ọsọ. igwu mmiri, ebe 745 nwere ike ịnwe ụfọdụ ọrụ. maka ndị egwuregwu atọ na-achọghị imefu ibu dị n'elu akara 945 ma ọ bụ Fenix ​​6.
Akwụkwọ ndị na-eso ngwa FCC gụnyere arịrịọ ka e zobe foto nke elekere ọhụụ ruo mgbe Septemba 9, na-atụ aro na nke a nwere ike ịbụ ụbọchị ntọhapụ nke Garmin. Anyị ga-edebe gị ozugbo anyị matara.
Ajụjụ ndị dị mkpa
Anyị nwere ike iji obi ike kwuo na ọhụụ ọhụụ ọhụụ edepụtara bụ Index Scale 2 (ma ọ bụ Index S2), dịka e kwuru na Garmin Jikọọ APK gbawara. Emepụtara Garmin mbụ index index na 2015 ma nwelite oge agafeela.
Dị ka ihe ndị akụrụngwa na wearables si kwuo, akwụkwọ ọnụ ọgụgụ na-egosi na ọ bụghị naanị na ị ga-enwe ike gbakọọ ịdị arọ gị, BMI, akwara, mmiri pasent, ọkpụkpụ ọkpụkpụ, na pasent abụba ahụ, kamakwa ugboro ole. obi obi na ọbara mgbali.
Otú ọ dị, o yiri ka enwere ike ịmalite akpịrịkpa mgbe elekere ọhụrụ ahụ gasịrị. Arịrịọ nzuzo na-arịọ ka edebe foto ruo mgbe Garmin gosipụtara ngwaọrụ ahụ, ma ọ bụ ụbọchị 180 mgbe a nabatara arịrịọ ahụ, nke ọ bụla na-ebu ụzọ.
A nabatara arịrịọ FCC na July 14, 2020, nke ga-apụta na ihe oyiyi a nọ n'okpuru mbubata ruo na Jenụwarị 10, 2021 n'oge kachasị ọhụrụ. Anyị nwere ike iche na Garmin chọrọ ijikwa ntọhapụ nke S2 ​​Index ma yabụ na-ezube ịhapụ ya tupu oge ahụ.
Ọgwụgwụ nke 2020 ga-abụ oge dị ukwuu iji bido ọhụụ ọhụụ ka ndị mmadụ na-amalite ịhazi atụmatụ afọ ọhụrụ ha ma na-eme atụmatụ ịhapụ kilogram ole na ole na mbido Afọ Ọhụrụ.
Ihe kacha mma Garmin nke ụbọchị:
Garmin - Onye bu ụzọ 945 GPS ...
Garmin Fenix ​​6, Adịchaghị ...
Isi mmalite: Nicholas Margot (site na email)